मैले तिमीहरूका बीचमा गरेका कामहरू तिमीहरूले आफ्नै आँखाले देखेका छौ, मैले बोलेका वचनहरू तिमीहरू आफैले सुनेका छौ, र तिमीहरूप्रतिको मेरो आचरण तिमीहरू सबैले जानेका छौ, यसैले मैले तिमीहरूमा यो काम किन गर्दैछु त्यो तिमीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ। म पूरा इमानदारीसाथ तिमीहरूलाई भन्छु, कि तिमीहरू आखिरी दिनहरूमा मेरो कामको विजयका साधनहरू, अन्यजातिहरू माझ मेरो काम फैलाउने उपकरणहरू बाहेक अरू केही होइनौ। अन्यजातिहरूको बीचमा मेरो काम अझै राम्ररी विस्तार गर्न र मेरो नाउँ फैलाउन, अर्थात् इस्राएलदेखि बाहिरको कुनै पनि जातिहरूमा यसलाई फैलाउन म तिमीहरूका अधर्म, फोहोरपन, विरोध र विद्रोहको माध्यमबाट बोल्छु। मेरो नाउँ, मेरा कार्यहरू र मेरो सोर अन्यजाति देशहरूमा फैलिन सकोस्, र त्यसरी ती सबै जातिहरू जो इस्राएलका होइनन् तिनीहरू मद्वारा जितिन सकून् र मेरो आराधना गर्न सकून्, र इस्राएल र मिश्र देशहरूदेखि बाहिर मेरा पवित्र देशहरू बनून् भनेर म यसो गर्छु। मेरो काम विस्तार गर्नु भनेको वास्तवमा मेरो विजयको कामलाई विस्तार गर्नु हो र मेरो पवित्र भूमिलाई विस्तार गर्नु हो; यो पृथ्वीमा मेरो पाउदान विस्तार गर्नु हो। तिमीहरू स्पष्ट हुनुपर्दछ कि तिमीहरू अन्यजातिहरूका बीचमा मैले सृष्टि गरेका प्राणीहरू मात्र हौ, जसलाई म जित्छु। मूल रूपमा, तिमीहरूसित न त हैसियत न त उपयोग हुने कुनै मूल्य नै थियो, र तिमीहरू कुनै कामको थिएनौ। मैले सम्पूर्ण देशमाथिको मेरो विजयको नमुना बन्न, मेरो सम्पूर्ण देशमाथि विजयको एकमात्र “सन्दर्भ सामग्री” हुनका निम्ति गोबरको थुप्रोबाट कीराहरू उठाएकोले मात्रै तिमीहरू मेरो सम्पर्कमा आउन सक्ने, र अहिले मेरो साथमा भेला हुन सक्ने सौभाग्य पाएका छौ। तिमीहरूको तुच्छ हैसियतले गर्दा मैले तिमीहरूलाई मेरा नमुनाहरू र आदर्श बन्न चुनेको छु। यही कारणले गर्दा मात्र म तिमीहरूका बीचमा काम गर्छु र बोल्छु, र म तिमीहरूसित जिउँछु र बसोबास गर्छु। तिमीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ कि यो मेरो व्यवस्थापनको कारणले र गोबरको थुप्रोमा हुने कीराहरूप्रतिको मेरो चरम घृणाको कारणले, म तिमीहरूको बीचमा बोलिरहेको छु—यो यस्तो स्थितिमा पुगेको छ कि म क्रोधित भएको छु। तिमीहरूको बीचमा गरिएको मेरो काम यहोवाले इस्राएलमा गर्नुभएको कामजस्तो बिलकुलै होइन, र विशेष गरी यो यहूदियामा येशूले गर्नुभएको काम जस्तो होइन। म ठूलो सहिष्णुताका साथ काम गर्छु र बोल्छु, र यी भ्रष्टहरूलाई म क्रोध र दण्डसहित जित्छु। यो इस्राएलमा यहोवाले आफ्ना जनहरूलाई डोऱ्याउनुभएको जस्तो पटक्कै होइन। इस्राएलमा उहाँको काम भोजन र जिउँदो पानी प्रदान गर्नुथियो, र आफ्ना जनहरूका निम्ति प्रबन्ध गर्दा उहाँ तिनीहरूप्रति दया र प्रेमले भरिपूर्ण हुनुहुन्थ्यो। आजको काम एक श्रापित जातिको बीचमा गरिन्छ, जो चुनिएका होइनन्। त्यहाँ प्रशस्त भोजन छैन, न त त्यहाँ तिर्खा मेट्ने जिउँदो पानीको पोषण नै छ, र त्यहाँ भौतिक वस्तुहरूको पर्याप्त आपूर्ति हुने कुरा त परै जाओस्; त्यहाँ पर्याप्त न्याय, श्राप, र सजायको आपूर्ति मात्र छ। गोबरको थुप्रोमा बसोबास गर्ने यी कीराहरू मैले इस्राएललाई दिएको जस्तो गाईवस्तु र भेडाहरूले भरिएका पहाडहरू, धेरै धन-सम्पत्ति, र सारा देशकै सबैभन्दा सुन्दर छोराछोरीहरू प्राप्त गर्न अयोग्य छन्। समकालीन इस्राएलीहरूले वेदीमा गाईवस्तु, भेडाहरू र सुन र चाँदीका थोकहरू चढाउँछन्, जसद्वारा म त्यसका मानिसहरूलाई पालनपोषण गर्दछु, व्यवस्था अन्तर्गत यहोवाले माग गर्नुभएको दश भागको एक अंशलाई उछिन्छु, यसरी मैले तिनीहरूलाई व्यवस्था अन्तर्गत इस्राएलीहरूले प्राप्त गरेकोभन्दा सय गुणा बढी दिन्छु। म जुन थोकले इस्राएललाई पालनपोषण गर्छु, त्यो अब्राहामले प्राप्त गरेकाभन्दा र इसहाकले प्राप्त गरेकाभन्दा बढी हुन्छ। म इस्राएलको परिवारलाई फलदायी बनाउनेछु र वृद्धि गराउनेछु, र म मेरा इस्राएलका मानिसहरूलाई पृथ्वीभरि फैलाउनेछु। म जसलाई आशीर्वाद दिन्छु र वास्ता गर्छु तिनीहरू अझै पनि इस्राएलका चुनिएका मानिसहरू नै हुन्—अर्थात्, ती मानिसहरू, जसले सबै कुरा मलाई समर्पण गर्छन् र जसले मबाट सबै थोक प्राप्त गरेका छन्। उनीहरूले मलाई आफ्नो मनमा राख्ने हुनाले तिनीहरूले आफ्ना नवजात बाछाहरू र थुमाहरू मेरो पवित्र वेदीमा बलि चढाउँछन् र उनीहरूसँग भएका सबै थोक मेरो सामु अर्पण गर्छन्, यहाँसम्म कि म फर्केर आउने आशामा उनीहरूका नवजात जेठा छोराहरूलाई पनि चढाउँछन्। र तिमीहरूचाहिँ के गर्दछौ? तिमीहरू मेरो क्रोध जगाउँछौ, मसँग मागहरू गर्दछौ, र मलाई बलि चढाउनेहरूले चढाएका थोकहरू चोरी गर्दछौ, र तिमीहरूले मलाई चोट पुऱ्याइरहेका छौ भनी तिमीहरूलाई थाहा हुँदैन; यसैले तिमीहरूले प्राप्त गर्ने भनेको अन्धकारमा रुवाइ र दण्ड मात्र हो। तिमीहरूले धेरै पटक मलाई रिस उठाएका छौ, र मैले मेरो जलिरहेका आगोहरू यतिसम्म बर्साएँ कि केही व्यक्तिहरूको दुःखद अन्त्य भएको छ, र खुसीका घरहरू उजाड् चिहानहरू बनेका छन्। यी कीराहरूका निम्ति मसँग अन्त्य नहुने क्रोध मात्र छ, र तिनीहरूलाई आशिष् दिने मेरो कुनै अभिप्राय छैन। मेरो कामको खातिर मात्र मैले एउटा अपवाद बनाएको छु र तिमीहरूलाई उठाएको छु, र ठूलो अपमान सहेको छु र तिमीहरूको बीचमा काम गरेको छु। यदि मेरा पिताको इच्छा नभएको भए म गोबरको थुप्रोमा कीराहरू स्याउँस्याउँ गरिरहेको त्यही घरमा कसरी बस्न सक्थें? तिमीहरूका सबै कार्य र बोलीवचनलाई म अत्यन्तै घृणा गर्दछु, र जे भए पनि, तिमीहरूको फोहोरपन र विद्रोहप्रति ममा केही “चासो” भएकोले, यो मेरा वचनहरूको ठूलो सङ्ग्रह भएको छ। अन्यथा, म तिमीहरूको बीचमा लामो समयसम्म बिलकुलै रहने थिइनँ। त्यसकारण, तिमीहरूले थाहा पाउनु पर्दछ, कि तिमीहरूप्रति मेरो आचरण सहानुभूति र दया मात्रै हो; ममा तिमीहरूप्रति एक थोपा प्रेम पनि छैन। तिमीहरूप्रति मसँग सहिष्णुता मात्र छ, किनकि म यो मेरो कामको खातिर मात्र गर्दछु। र मैले फोहोर र विद्रोहीपनलाई “कच्चा पदार्थहरू” को रूपमा चुनेको हुनाले मात्रै तिमीहरूले मेरा कार्यहरूलाई देखेका छौ; अन्यथा, म यी कीराहरूलाई मेरा कार्यहरू बिलकुलै प्रकट गर्दिनथिएँ। म अनिच्छाले मात्र तिमीहरूमा काम गर्दछु, त्यस्तो तत्परता र इच्छसहित होइन जसरी मैले इस्राएलमा मेरो काम गरेको थिएँ। मैले आफैलाई तिमीहरूसित बोल्न कर लाउँदै मैले मेरो क्रोध थामिरहेको छु। यदि मेरो महान् काम हुँदैनथ्यो भने म कसरी त्यस्ता कीराहरूको दृश्य हेरिरहन सक्थें र? यदि मेरो नाउँको खातिर नभएको भए, म धेरै पहिले नै सबैभन्दा उच्च स्थानमा चढेको हुन्थें र गोबरको थुप्रोमा भएका यी कीराहरूलाई जलाएर पूर्ण रूपमा भस्म बनाएको हुन्थें! यदि मेरो महिमाका लागि नभएको भए, यी दुष्ट भूतात्माहरूलाई म कसरी खुल्लमखुल्ला मेरो आँखाको अगाडि टाउको हल्लाउँदै मेरो विरोध गर्ने अनुमति दिन्थें र? यदि सानोभन्दा सानो बाधाविना सुचारु रूपले मेरो काम गर्नु नपरेको भए म कीराहरू जस्ता यी मानिसहरूलाई जानी-जानी मसँग दुर्व्यवहार गर्ने अनुमति कसरी दिन सक्थेँ र? यदि इस्राएलको गाउँमा एक सय जना मानिस यस प्रकारले मेरो विरोध गर्न उठेका भए, तिनीहरूले मलाई बलिदानहरू चढाए पनि, म तिनीहरूलाई नाश पार्नेथिएँ र तिनीहरूलाई जमिनका चिराहरूमा हालिदिनेथिएँ, यसरी अन्य सहरका मानिसहरूलाई फेरि विद्रोह गर्नबाट रोक्नेथिएँ। म सबै कुरा भस्म गर्ने आगो हुँ र म अपराध सहँदिन। मानिसहरू सबै मद्वारा सृष्टि गरिएको हुनाले, म जे भन्छु र गर्छु, त्यो तिनीहरूले पालना गर्नैपर्छ र तिनीहरूले विद्रोह गर्नु हुँदैन। मानिसहरूलाई मेरो काममा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार छैन, र मेरो काम र मेरा वचनहरूमा के सही वा के गलत छन् भनी विश्लेषण गर्न तिनीहरू योग्य हुने कुरा त परै जाओस्। म सृष्टिको प्रभु हुँ, र सृष्टि गरिएका प्राणीहरूले मैले माग गरेका सबै कुरा आदरको हृदयसहित हासिल गर्नुपर्दछ; तिनीहरूले मसँग तर्क गर्ने कोसिस गर्नु हुँदैन, र विशेष रूपमा तिनीहरूले विरोध गर्नु हुँदैन। मेरो अधिकारद्वारा म मेरा मानिसहरूमाथि शासन गर्दछु, र जो मेरो सृष्टि भाग हुन् तिनीहरू सबै मेरो अख्तियारको अधीनमा बस्नुपर्छ। आज तिमीहरू मेरो सामु साहसी र हठी भए पनि, जुन वचनहरूद्वारा म तिमीहरूलाई शिक्षा दिन्छु ती तिमीहरूले पालन नगरे पनि र कुनै डर नमाने पनि म सहिष्णुतासाथ मात्रै तिमीहरूका विद्रोहीपनको सामना गर्दछु; सानो, तुच्छ कीराहरूले गोबरको थुप्रोमा फोहोर उठायो भन्दैमा म आफ्नो रिस पोखाउँदिन र मेरो कामलाई प्रभावित गर्दिनँ। मेरा पिताको इच्छाको खातिर म मैले घिनाउने गर्ने सबै कुरा र मैले घृणा गर्ने सबै कुराहरूको अस्तित्वलाई सहन गर्दछु, मेरा वाणीहरू पूर्ण नहुञ्जेल, मेरो अन्तिम क्षणसम्‍मै म त्यसो गर्नेछु। चिन्ता नगर्! म नाम विनाको कीराको स्तरमा डुब्न सक्दिनँ, र म आफ्नो सीपको स्तरलाई तँसँग तुलना गर्दिनँ। म तँलाई घृणा गर्दछु, तर म सहन सक्छु। तैंले मेरो आज्ञा उल्लङ्घन गर्छस्, तर तँ त्यस दिनबाट उम्कन सक्दैनस्, जुन बेला म तँलाई सजाय दिनेछु, जुन मेरा पिताले मसँग प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। के सृष्टि गरिएको कीरालाई सृष्टिका प्रभुसँग तुलना गर्न सकिन्छ? शरद ऋतुमा, झर्ने पातहरू तिनका जराहरूमा फर्कन्छन्; तँ तेरा “पिता” को घर फर्कनेछस्, र म मेरा पिताको छेउमा फर्कनेछु। म उहाँको कोमल स्नेहको साथमा हुनेछु, र तेरा पितापछि तँ कुल्चिइनेछस्। मसँग मेरा पिताको महिमा हुनेछ, र तँसँग तेरो पिताको सर्म हुनेछ। म तँलाई साथ दिन धेरै अघिदेखि रोकेर राखेको सजायको प्रयोग गर्नेछु, र लाखौँ वर्षदेखि भ्रष्ट भएको तेरो दुर्गन्धित देहमा तैँले मेरो सजाय भोग्नेछस्। मैले सहिष्णुताको साथमा तँमा मेरा वचनहरूको काम पूरा गरेको हुनेछु, र तैंले मेरा वचनहरूबाट विपत्ति भोग्ने भूमिका पूरा गर्न सुरु गर्नेछस्। म धेरै आनन्दित हुनेछु र इस्राएलमा काम गर्नेछु; तँ हिलोमा लुटपुटिँदै र मर्दै रुनेछस् र दाह्रा किट्नेछस्। म मेरो मूल स्वरूपलाई फेरि प्राप्त गर्नेछु र अझै तँसँग फोहोरमा बस्नेछैन, जबकी तैंले आफ्नो मूल कुरूपता फेरि पाउनेछस् र गोबरको थुप्रो वरिपरि प्वाल बनाइरहनेछस्। जब मेरो काम र वचनहरू समाप्त हुन्छन् त्यो मेरो लागि आनन्दको दिन हुनेछ। जब तेरो विरोध र विद्रोहीपन सकिन्छ, त्यो तेरो लागि रुने दिन हुनेछ। म तँप्रति सहानुभूति राख्नेछैनँ, र तैंले मलाई फेरि कहिल्यै देख्नेछैनस्। म अब उप्रान्त तँसँग कुनै बातचित गर्नेछैनँ, र तैंले मलाई फेरि कहिल्यै भेट्नेछैनस्। म तेरो विद्रोहीपनलाई घृणा गर्नेछु, र तैंले मेरो प्रेमिलोपनलाई याद गर्नेछस्। म तँलाई प्रहार गर्नेछु, र तैंले मेरो धेरै चाहना गर्नेछस्। म खुसीसाथ तँबाट बिदा हुनेछु, र तैँले तँ मप्रति कति ऋणी छस् भनी थाहा पाउनेछस्। म तँलाई फेरि कहिल्यै भेट्नेछैनँ, तर तैंले सधैँ मेरो लागि आशा गर्नेछस्। म तँलाई घृणा गर्दछु, किनकि तैंले अहिले मेरो विरोध गर्छस्, र तैंले मलाई याद गर्नेछस्, किनकि वर्तमानमा म तँलाई सजाय दिन्छु। म तँसँगै बस्न इच्छुक हुनेछैनँ, तर तैंले त्यसका निम्ति अति नै तृष्णा गर्नेछस् र अनन्तसम्म रुनेछस्, किनकि तैंले मलाई जे गरिस् ती सबैका निम्ति पछुतो गर्नेछस्। तैंले आफ्नो विद्रोह र विरोधको लागि पछुतो गर्नेछस्, तैंले पछुताउँदै आफ्नो अनुहार भुइँतिर घोप्ट्याउने समेत छस् र मेरो अगाडि लम्पसार परेर फेरि कहिल्यै पनि मेरो आज्ञा उल्लङ्घन नगर्ने शपथ खान्छस्। आफ्नो हृदयमा तैंले मलाई मात्र प्रेम गरे तापनि तैंले मेरो आवाज कहिल्यै पनि सुन्न सक्नेछैनस्। म तँलाई आफैप्रति लज्जित तुल्याउनेछु।